न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७५ मङ्सिर १ शनिबार |
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित पहिलो पटक मन्त्री बन्दा जति सफल भएका थिए, अहिले त्यत्ति असफल भइसकेका छन् । उनी आफै भनिरहेका छन्, परिस्थिति र प्रसँगले गर्दा काममा केही ढिलासुस्ती भइरहेको छ ।
साइकल मन्त्रीको छली बनाएका पण्डितले अहिले आफ्ना सचिवालय र परिवारका सदस्यलाई समेत गाडी बाडेर आलोचनाको भागिदार भइरहेका छन् । त्यतिमात्र होइन गर्नु पर्ने काम पनि उनले गर्न सकिरहेका छैनन् । संघीय कानुन नबन्दा प्रादेशिक कानुन र स्थानीय कानुन बन्न सकिरहेका छैनन् ।
संघीय प्रहरी ऐन निर्माण, कर्मचारी समायोजन ऐन प्रशासन मन्त्रालयले बनाएर नसक्दा मुलुक अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको छ । केही जटिलताहरु रहेकाले समस्या देखिएपनि समाधानको प्रयासमा सरकार रहेको भन्दै उनी पञ्छिन खोजिरहेका छन् ।
जनताको चाहना र भावना भनेको नै सुशासन, न्याय र विकाससँग जोडिए पनि त्यसमा उनको ध्यान गएको छैन् । प्रशासन मन्त्रालयले नै हो मुलुकका कर्मचारी सञ्चालन गर्ने, समायोजन गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिनका लागि कानुन बनाउने, त्यस मामलामा मन्त्री पण्डितले सिन्को समेत भाच्न सकिरहेका छैनन् । उत्साहित भएर काम गर्नुको साटो झारा टार्ने काममा मन्त्री पण्डित लागेका छन् ।
आफूले सरकारले दिएको सुविधाबाहेक थप सुविधा नलिएको भन्ने मन्त्रीसंग करिव दर्जन गाडी छन् । पाएको जिम्मेवारी पुरा नगर्ने तर, सेवा सुविधा भने प्रशस्त लिने उनलाई के नै भन्ने शव्द बाँकी रहयो र । कर्मचारी समायोजन नभएकाले स्थानीय तह र प्रदेश काम विहिन भएका छन् ।
जसका कारण सरकारले छुट्टाएको बजेट फ्रिज हुने सम्भावना बढेर गएको छ । यसमा पनि उनको ध्यान छैन । भन्छन पुस मसान्तसम्म समायोजन भइसक्छ । मन्त्रीको यस्तो भनाईलाई के भन्ने ? पहिलो पटक मन्त्रीको कार्यकाल गुजारेर निस्कदा जुन चामका साथ निस्किएका थिए, त्यही चामले उनी मोरङ ६ बाट कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालालाई हराउन सफल भए ।
अहिले मन्त्री भएर गरेको काम हेर्दा कहाँ गएर लुक्दै मन्त्रालयबाट बाहिरिने हो भन्ने अवस्था आएको छ । हाम्रा नेताहरु मन्त्री बनेर जनताको सेवा गर्नेतर्फ भन्दा आफ्नो दुनो कसरी सोझ्याउने भन्नेतर्फ बढि ध्यान दिन्छन । त्यो परिपार्टीलाई सुधारेर आफुले गरेमा मुलुक सुध्रन्छ भन्ने मनोबृत्ति विकास नहुदासम्म देशले काचुली फेर्न सक्दैन ।
मुलुकले काचुली फेर्नका लागि नेता योग्य हुनुपर्छ । नेतालाई योग्य बनाउन जनताको खवरदारी आवश्यक हुन्छ । त्यसमा आजैबाट हामी लाग्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।
निशेधाज्ञा र नागरिक स्वतन्त्रता